Distribution Optical Socket Manufacturers kunye Suppliers | China Optical Distribution Socket Factory
Distribution Optical socket (point) ekwabizwa ngokuba ekupheleni ibhokisi yomsebenzisi, asisule i eqhotyoshelweyo kugesi odongeni. Amanqaku Ulwabiwo Optical zazenzelwe izisombululo FTTH kunye nothungelwano zezenzi optical. Ukuba isicelo FTTH imidlalo, umngxunya amaxhama enombala isetyenziselwa ukuphelisa ifayibha ngeentambo enombala, nemitya patch, nemitya pigtail, kunye ezisebenza ngokubakho ngokweemfuno zabathengi.
FTTH ifayibha optic socket ezimbini, okanye ezine amazibuko, enika ufakelo enye okanye ezimbini ezisebenza ngokubakho ifayibha optic, eyakhelwe ubukho SC rhoqo.
Iibhokisi isiphelo fibre optic Jera kaThixo ukhuseleko ngomatshini, ulawulo indlela ifayibha bhetyebhetye kunye nolawulo, lula ufakelo ngenxa omsebenzi osemqoka, yaphunyezwa kuyilo zonke iibhokisi ukupheliswa optic FTTH Fibre.
Jera inika zonke faceplates FTTH fibre optic, kunye nezincedisi FTTH efunekayo: Fiber Umthambo Pigtail, Umthambo Umthambo uPatch Cord, Umthambo Umthambo samandla, Ukhuseleko sleeve, Box Fiber optic Mayekiso, Umthambo Umthambo Splice Ukuvalwa, Beka yamasango ngocingo, Ezantsi zikhokelela okubamba, izibiyeli ipali , nisishiye esibondeni, okubambelela Ukunqunyanyiswa okubamba, intambo yokugcina odangeleyo, njl sinikela zigqityiwe ingxenye isixando enombala kwezicelo FTTH.
Zonke izincedisi FTTH wadlula umsebenzi amava zovavanyo kunye amaqondo ukusuka -60 ° C ukuya ku +60 ° C test ukwaluphala, umhlwa ukumelana test, uvavanyo IP njl
FTTH unikezelo woqondo socket OPD-06
FTTH unikezelo woqondo socket OPD-01H
FTTH unikezelo woqondo socket OPD-04
FTTH unikezelo woqondo socket OPD-02M